Nepal Dayari | को हुन् नेपाली युवा ? जो युक्रेन-रसियाको यु’द्धमा युक्रेनका तर्फ बाट ल’डाइँ ल’ड्दैछन् !
फागुण १८, २०७८ बुधबार ८०४ पटक हेरिएको
नेपालबाटै गएका एकजना युवकको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा आएको छ। युक्रेनबाटै सार्वजनिक भएको यो भिडिओमा नेपाल घर भएको बताउँदै प्रताप बस्नेत नामका युवक त्यहाँ ल’डाइँका लागि तयार भएको बताइरहेका छन्।
नेपालबाट आएको बताउने प्रताप बस्नेत नामका ती युवक आफू रसिया वि’रुद्ध ल’ड्न तयार भएको भन्दै युक्रेनी सेनामा भर्ती हुन पुगेका छन्। अंग्रेजी भाषामा बोलिरहेका उनले युक्रेनको पक्षमा उभिँदा आफूलाई गर्व लागिरहेको बताएका छन्।
‘युक्रेनको पक्षमा यु’द्ध ल’ड्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। म युक्रेनको पक्षमा ल’ड्न सेनामा भर्ना हुँदैछु’ उनले भनेका छन्, आइएम फर्म नेपाल म भर्ती हुन अहिले सेनाको क्याम्पमा आएको छु।’
उनले युक्रेनको पक्षमा उभिँदै यो भूमि जोगाउन ल’ड्ने बताएका छन्। ‘यो भूमि युक्रेनको हो, यहाँ रसियाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन’ उनले भनेका छन्, ‘ अहिलेको त’नावपूर्ण अवस्थामा म रातभर सुत्न सकेको छैन।’
उनले युक्रेनमाथि रसियाली आ’क्रमणलाई मानवीयता र मानवअधिकारको सवाल पनि भनेका छन्। ‘यो मानवीयता र मानवअधिकारको सवाल पनि हो’ उनले भनेका छन्, ‘मैले आफूलाई यहाँ सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन। यो युक्रेनका लागि केही राम्रो गर्ने बेला हो।’
उनले आफू अन्तिम श्वास रहेसम्म युक्रेनका लागि ल’ड्ने पनि बताए। ‘म अन्तिम श्वास लियुन्जेलसम्म युक्रेनका लागि ल’ड्न तयार छु’ उनले भनेका छन्, ‘मैले यहाँ काम गरिरहेको छु। यो बेलामा मैले युक्रेनबाट खाना र सेल्टर पनि पाएको छु।’
उनले आफूलाई युक्रेनले पालेको बताउँदै संकटमा साथ दिने पनि तर्क गरेका छन्। ‘युक्रेनलाई अहिले मेरो सहयोगको आवश्यकता छ, त्यसैले म युक्रेनको लागि ल’ड्दैछु।’
बुधबार सार्वजनिक भएको यो भिडिओबारेमा नेपालका अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छैनन्। यु’द्ध ल’ड्न तयार भएका यी नेपाली युवालाई त्यहाँबाट उद्धार गरियो गरिएन या सेनामै भर्ना भइसकेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।